Kpọtụrụ - Ngwongwo ndị na-ere ahịa maka mmanụ dị Mkpa | AromaEasy
Biko tinye ahịa anyị WhatsApp nọmba +1 (240)258-7761
Ọrụ Ndị Otu:+ 1 (240) 258-7761
(Zhongshan Qixiang Electric elo Co., Ltd.) bụ onye isi ụwa na teknụzụ Aroma diffuser zuru ụwa ọnụ. Nke a gụnyere isi ihe na-esi ísì ụtọ, mmanụ ụgbọala na-enye ụgbọ ala, na ikuku ikuku anyị kacha ere.
Mịnye mmanụ anyị dị mkpa bụ onye na-ebubata ngwa ahịa buru ibu na ụlọ ọrụ.
Ọpụrụiche anyị bụ ikike anyị iji chụpụ echiche ọhụụ na-amị mkpụrụ, na-ekepụta ihe kachasị na-agbasa mgbasa iji bulie ahụmịhe gị.
Ngwaọrụ mara mma nke ceramiki nwere ike nke Bluetooth®, ikuku na-enweghị ikuku, yana ndị na-enye mmiri mmiri bụ ihe atụ ole na ole nke AromaEasy ™ kpughere ụwa.
Agbanyeghị etu arụmọrụ nke ndị na - enye anyị ọrụ siri kwalite, ịdị mfe nke ime ihe na nchekwa nchekwa etinyere na nke ọ bụla.
You bụ onye nrụpụta ka ọ bụ ụlọ ọrụ azụmaahịa?
Kedu ihe bụ isi ahịa gị?
Kedu ụbọchị nnyefe maka atụ?
Ngwaahịa gị na-agbaso ụkpụrụ anyị?
Ee, ngwaahịa anyị nwere ike ịgafe ule dị ka ịchọrọ, dịka: Bsci, CE, RoHS, ETL, GS, PSE, wdg.
Kedu otu esi ejikwa njikwa ahụ?
Kedu ihe MOQ?
Kedu ka ị na-ebufe ngwongwo ma ogologo oge ọ na-ewe?
Kedu ihe bụ akwụkwọ ikike gị